बिदेशमा ग,र्भ बो,काएर फरार युवक सम्पर्कमा आउँदा युवती सँग पर्‍यो ल,फडा, (भिडियो सहित)
झापा जिल्लाको बुद्धशान्ति नगरपालिका वडा नम्बर ३ किनाराबस्ती घर भएकी अनुसा रसाइली नाम गरेकि एक महिला वैदेशिक रोजगारिको क्रममा दुबै गएकी रहिछिन ।
दुइचार पैसा कमाउने सपना बोकेर दुबइ गएकी अनुसाको जिन्दगी नै ब,र्बा,द गरिदियो यहि वैदेशिक रोजगारले । उनि दुबइमा काम गर्ने क्रममा उनको भेट सिरहामा बस्ने नुर खान नाम गरेका पुरूष सँग भएछ जुन भेट उनको जिबनकै सबैभन्दा दु,र्भाग्य,शाली भेट बन्यो ।
भेटघाट पछि बोलचाल अनि मायाप्रीति अनि त्यसपछी मायाको चिनोको स्वरुप अनुसाको पेटमा ग,र्भ । यति हुन्जेलसम्म उनिहरुको सम्बन्ध पनि राम्रै रह्यो ।
निरन्तरको भेटघाट, मिठोमीठो कुराकानी हुँदै जादा सम्बन्धमा भने तितोपन हुँदै गयो । नानी जन्मेपछी त वा,स्तै गर्न छोडेछ्न नुर खानले । पेटमा सात महिनाको ग,र्भ छ्हुन्जेलसम्म उनी बिदेशमा नै काम गरेर बसेकी रहिछिन तर त्यसपश्चात भने कम्पनिले थाहा पाएछ र उनको शरीर नै उनको श,त्रु बन्न पुग्यो ।
पहिले काठमाडौं जाउ म सबैकुराको ता,रतम्य मिलाउछु भनेका नुर खान भने दुइ महिनासम्म सम्प,र्कमा नै आएनछ्न । दुइ महिनापछि भने अनुसाले खोजी गरेपछि नुरखान सम्पर्कमा आए र उनले काठमाडौं जाने सल्लाह दिए र खर्च सबै आफुले हेर्ने बाचा पनि गरे उनले ।
पैसा पनि पठाइदिएका नुर खान नानी जन्मेपछी भने अनुसालाइ हेर्न छा,डे र त्यसपछी उनी ए,काएक बे,पत्ता भएका थिए र सम्पर्क बि,हिन रहेका थिए । अहिले भने नुरखान अनुसा सँग फोन सम्पर्कमा आएका छ्न । बाकी भिडियो मा हेरौ
२०७८ मंसिर १९, आईतवार प्रकाशित0Minutes 105 Views
काठमाडौंको एक घरमा कोठाभित्र श्रीमान-श्रीमती मृत अवस्थामा भेटिए,,,,,,
दु’खत खबर ! घर नजिकैको पसलमा सामान किन्न गएकी ७ वर्षीया बालिका’लाई…..
गौशालास्थित सिटिजन बैंकमा सेवाग्राही कुटिए
५.	जागिर खाएको २२ बर्षमा काठमाडौंमा २२ वटा घर थप सामग्री :
६.	घाँटीमा ‘डिएसएलआर क्यामेरा’ भिरेर नयाँ वर्ष मनाउन विदेश पुगे पूर्वमुख्यमन्त्री राई !!!
के पी बा जिन्दाबाद भन्दै हि’ड्ने का’र्यकर्तालाई आमाले थ’प्पड हानिन्ः बिरोध खतिवडा
भारतमा भेष बदलेर बसेका थिए प्रहरीको मोटरसाइकल लिएर भागेका कैदी यमराज
रुखबाट लडेर अभिषेकको मृत्यु दया हुनेले Rip लेख्नुहोस